३० प्रतिशत घट्यो कारोबार रकम - Naya Patrika
३० प्रतिशत घट्यो कारोबार रकम
काठमाडौं, २७ असार | असार २७, २०७५
मंगलबार नेप्से परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्से सामान्य अंकले मात्र घटे पनि यस दिन कारोबार रकम भने ३० प्रतिशत घटेको छ । बजार खुलेको करिब ४५ मिनेट ओरालो लागेको
नेप्से, त्यसपछिको समयमा बढेको थियो ।
यस दिन १ हजार २ सय १४ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से अन्तिम समयमा भने पुनः ओरालो लागेको थियो । बजारले निश्चित दिशा लिन सकिरहेको छैन । सोही कारण लगानीकर्ताहरू अन्योलमा छन् । बजार सामान्य बढ्नेबित्तिकै अल्पकालीन लगानीकर्ताहरू नाफा सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्छन् ।
फलस्वरूप बजार ओरालो लाग्ने एक ब्रोकरले बताए । मौद्रिक नीतिले सेयर धितोमा कर्जाको सीमा खुकुलो बनाउने र बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने समाचारले उचालिएको बजार अघिल्लो दिन घटेर बन्द भएको थियो । नेप्सेसँगै कारोबार रकम घटेपछि लगानीकर्ताको मनोबल केही घटेको एक लगानीकर्ताले बताए ।
यस दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ५० अंक घटेर १ हजार २ सय ५ दशमलव ९३ विन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव १३ अंक बढेर २ सय ५४ दशमलव शून्य ६ विन्दुमा पुगेको छ ।
यस दिन १ सय ६० कम्पनीको ४ हजार ४ सय ९३ पटकको कारोबारमा २८ करोड ७९ लाख ७४ हजार ४ सय ३१ रुपैयाँ (म्यानुअल टर्नओभरसहित) बराबरको ८ लाख ७६ हजार ६ सय ११ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४१ दशमलव २५ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन कृषि विकास बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । यस दिन सो बैंकको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । सेयरसंख्याका आधारमा यस दिन गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको संस्थापक सेयर अगाडि रहेको छ भने कारोबार संख्याका आधारमा रैराङ हाइड्रोपावर अगाडि रहेको छ ।
यस दिन गरिमाको ६५ हजार १ सय ५० कित्ता संस्थापक सेयर किनबेच भएको छ भने रैराङको ३ सय ११ पटक सेयर कारोबार भएको छ । वरुण हाइड्रोपावरको सेयरमूल्य यस दिन ७ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको
सिनर्जीको १ः०.२५ हकप्रद निष्कासन खुला
सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडले असार २५ गतेदेखि १ बराबर शून्य दशमलव २५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले रू. १ सय अंकित मूल्यका ११ लाख ८६ हजार २२ दशमलव ४७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति साउन २७ गते रहेको छ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले बिक्री प्रबन्धक, सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड र आस्बा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ४४ लाख ८९ दशमलव ८९ रहेको छ भने हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५९ करोड ३० लाख ११ हजार २ सय ३६ दशमलव ७३ रुपैयाँ पुग्नेछ ।
स्वरोजगारको १ः१ हकप्रद
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले साउन १३ गतेदेखि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले रु. १ सय अंकित मूल्यका १२ लाख २४ हजार ९ सय ७७ दशमलव ६० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासन बन्द हुने मिति भदौ १७ गते रहेको छ ।
कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । सेयरधनीहरूले बिक्री प्रबन्धक, एनएमबि बैंकका शाखा कार्यालय, स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था, काभ्रेपलाञ्चोक, गुडविल फाइनान्सका शाखा कार्यालय, कामना विकास बैंकको ज्ञानेश्वर शाखा, सेन्ट्रल फाइनान्सको कुपन्डोल तथा चाबहिल शाखा कार्यलय र सी–आस्बा प्रणालीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ करोड २४ लाख ९७ हजार ७ सय ७० रहेको छ भने हकप्रद सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड ४९ लाख ९५ हजार ५ सय २० रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले जारी गर्न लागेको हकप्रदलाई इक्रा नेपालले ‘इक्राएनपी आइपिओ ग्रेड फोर प्लस’ रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको आधारभूत अवस्था औसतभन्दा कमजोर रहेको संकेत गर्दछ । असार २८ गतेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले सो हकप्रद सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अनलाइन प्रणाली सुरु : करिब १ प्रतिशत बढ्यो नेप्से
ब्याजदर वृद्धिले प्रभावित बजार
सेयर लगानीकर्ता रिले अनशनमा